Android Car Dvd Player - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Android Car Dvd Player ထုတ်ကုန်များ)
ဂေါက်သီး7FOR ANDROID CAR DVD player
ဂေါက်သီး7FOR ANDROID CAR DVD player ဂေါက်ကွင်း71. အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ကိုကစားသမားကပဲ pad ပါနဲ့တူပေမယ့်ကားတစ်စီးပေါ် android 6.0 အားဖြင့်ဂိမ်းအခမဲ့ download နဲ့အထူး function ကို ihas, ကကားကိုဒီဗီဒီကစားသမားကိုခေါ်, လူတွေကလွဲလို့ကားထဲတွင်အများအပြားဂိမ်းများကိုကစားသူ, အခြားလူတွေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်...
BMW ကား E39 ဘို့ကားတစ်စီး DVD Player ကို
BMW ကား E39 ဘို့ကားတစ်စီး DVD Player ကို 1. ယခုငါတို့ BMW ကား E39 စီးရီးများအတွက်ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမားအားလုံးကိုမော်ဒယ်များအပါအဝင် 300 ကျော်မော်ဒယ်ဟာ android ကားကို DVD player ကိုပေး။ တည်ငြိမ်မြန်ဆန်နောက်ဆုံးပေါ် software နှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကို DVD player ။ အရည်အသွေးအာမခံချက်မှ, ဒီ...
တိုယိုတာ Levin များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီးရေဒီယို GPS
တိုယိုတာ Levin CAR DVD player 1. တိုယိုတာ Levin က Android CAR DVD player ပံ့ပိုးမှု Full HD ကို 1920X1080P: DAT, MPG, MPEG, VOB, MP4, MOV, AVI, DVD ကိုဗီဒီယို, ASF, WMV, MKV, TS, RM, RMVB, နှင့်ဗီဒီယို coding ကို formats အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုထောကျပံ့ ထိုကဲ့သို့သော H.264, Xvid, MPEG2, MPEG4, VC ကို-1, WMV9,...
Cayenne CAR များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD player
Cayenne CAR များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD player ဒီမော်ဒယ် Cayenne CAR.with HD ကို Screen ကိုကားရေဒီယို Player ကိုများအတွက်ကားတစ်စီး DVD player ။ အဆိုပါ cae DVD ရေဒီယိုကစားသမား sensitivity ကို setting ကိုမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်, စားပွဲပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့ sensitivity...
Renault Megan များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကို
Renault Megan (Ibiza အန်းဒရွိုက်ကား DVD 5.1.1) အတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. Renault က Megan ၏သတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: HD ကိုမျက်နှာပြင်: 1024 * 600 OS ကို: အန်းဒရွိုက် 5.1.1 စနစ်က CPU ကို: Rockchip 3188 Cortex A9, 4-Core ပင်မ Frenqency: 1.6GHz ရမ်: Samsung 1GB DDR3 ကို...
Subaru သစ်တော 2008-2011 ဘို့ကားတစ်စီးအသံအစိတ်အပိုင်းများ
Supply နိုင်ခြင်း: 35000 pieces/year
Subaru သစ်တော / Impreza 2008-2011 များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD ကို ဒီ Subaru သစ်တော / Impreza ဟာ android ကားရေဒီယို Player ကိုများအတွက် 1.HD မျက်နှာပြင်။ အဆိုပါရေဒီယို sensitivity ကို setting ကိုမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်, စားပွဲပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့ sensitivity ကိုနိမ့်သည်မှန်လျှင်,...
Peugeot မော်ဒယ်ဟာ android ကားတစ်စီး DVD player
ထုပ်ပိုး: 370 * 330 * 270MM / ဆုကြေးဇူးကိုသေတ္တာ
Peugeot မော်ဒယ်ဟာ android ကားတစ်စီး DVD player 1 ။ ယခုငါတို့ Peugeot အားလုံးကိုမော်ဒယ်များအပါအဝင် 300 ကျော်မော်ဒယ်ဟာ android ကားကို DVD player ကိုပေး။ တည်ငြိမ်မြန်ဆန်နောက်ဆုံးပေါ် software နှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကို DVD player ။ အရည်အသွေးအာမခံချက်မှ, ဒီ Peugeot ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမားအီး /...
PG 301 2013 MP5 DVD ကို Player ကို
PG 301 2013 MP5 DVD ကို Player ကို 1 ။ ယခုငါတို့ KD-8104 PG 301 2013-2016 အားလုံးကိုမော်ဒယ်များအပါအဝင် 300 ကျော်မော်ဒယ်ဟာ android ကားကို DVD player ကိုပေး။ တည်ငြိမ်မြန်ဆန်နောက်ဆုံးပေါ် software နှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားကို DVD player ။ အရည်အသွေးအာမခံချက်မှ, ဒီ KD-8104 PG 301 2013-2016 ကားတစ်စီး...
ဟွန်ဒါ CRV များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကို
ဟွန်ဒါ CRV များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဟွန်ဒါ CRV ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကိုများအတွက် 1. ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုကားတစ်စီး DVD player ။ ဟွန်ဒါ CRV ရေဒီယို IC များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကိုအဘို့ကားကို DVD player: 7706 ယခု...
VW တို့စီးရီးများအတွက် PASSAT 2015 ကားကို DVD Player ကို
VW တို့စီးရီးများအတွက် PASSAT 2015 ကားကို DVD Player ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် PASSAT 2015 ကားကို DVD Player ကိုထောက်ပံ့များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကိုများအတွက် 1. ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုကားတစ်စီး DVD player ။ PASSAT 2015 ကားကို DVD Player ကို IC များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player...
Renault က Megan 2003-2009 များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကို
Renault က Megan 2003-2009 များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Renault က Megan 2003-2009 များအတွက် Android မှာကားတစ်စီးကို DVD player ကိုများအတွက် 1.Our အန်းဒရွိုက်ကားကိုဒီဗီဒီ, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
7 လက်မ CX-5 2012-2013 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား
7 လက်မ CX-5 2012-2013 ဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား 1.Our အန်းဒရွိုက်ဟာ android နှင့် wince ကားကို DVD Player ကိုအပါအဝင်မော်တော်ကား DVD ကို for7 လက်မ CX-5 2012-2013 ဟာ android ကားတစ်စီးဒီဗီဒီ, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ကနေအများကြီးတန်ဖိုး...
အန်းဒရွိုက် 6.0 ကားအသံ Peugeot 301
အန်းဒရွိုက် 6.0 ကားအသံ Peugeot 301 1. prompt ကိုနှင့်လုံခြုံတင်ပို့များအတွက်ငွေပေးချေမှုမှတ်စုတွင်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းပါ။ အဆိုပါပစ္စည်းကိုသာ Aliexpress မှတင်ပို့နေသည်လိပ်စာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ DHL / TNT / EMS သို့မဟုတ်အခြားအမြန်စာပို့လုလင်တို့က 1) သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတာဝန်များ,...
HD ကို Touch ကိုမျက်နှာပြင်က Android 5.1 ကားကို DVD
HD ကို Touch ကိုမျက်နှာပြင်က Android 5.1 ကားကို DVD 1. အထွေထွေ: - သက်ဆိုင်သောမော်တော်ကား & Models & ကိုးကားစရာနှစ်များ: - (purchasing ရှေ့၌သင်တို့မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်နံပါတ်နှင့်ဗဟို console ကိုအတည်ပြုပေးပါ!) - က Android operating system - CPU ကိုပရို: 1.6GHz Cortex A9...
Honda Civic 2016 မာလ်တီမီဒီယာအညွှန်း
Honda Civic 2016 မာလ်တီမီဒီယာအညွှန်း 1. Honda Civic 2016 မာလ်တီမီဒီယာအညွှန်း G + က G ဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်: G + က G touch panel ကို, အလုံးစုံဖန်ဖွဲ့စည်းပုံအမြင့်ဆုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့် optical ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်။ ဘုံဖန်များအတွက်အလင်းကိုထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း 90 ~ 92% ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 98 ~ 99,5% ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။...
VW တို့ဂေါက်သီး7ရေဒီယိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကိုများအတွက်
VW တို့ဂေါက်သီး7ရေဒီယိုမာလ်တီမီဒီယာ Player ကိုများအတွက် 1. အင်္ဂါရပ်များ: dual-screen ကိုအပြန်အလှန်ထုတ်ကုန်, High-end မိုဘိုင်းနှင့်ခရီးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အများဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းက high-tech ထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အထူးသမတ် devices များနှင့်အမျှမော်တော်ယာဉ်,...
10.1 လက်မ 2010-2015 VW တို့ Volkswagen က Tiguan
10.1 လက်မ 2010-2015 VW တို့ Volkswagen က Tiguan 1. 3G module: ဤ 3g module တစ်ခုနှင့်အတူ, သင်ကတစ်ခု SIM ကဒ်ထည့်ခြင်းဖြင့် 3g အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Backup ကိုကင်မရာ: ဒါဟာနောက်ပြန်ဆုတ်စဉ်အလိုအလျောက်ယာဉ်ရပ်နားပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲဘို့ backup တစ်ခုကကင်မရာကထပ်ပြောသည်။ ဒီ option က၎င်း၏ကွန်နက်ရှင်အဘို့သင့် car`s...
10.1 လက်မကို Android 5.1 2003-2007 ဟွန်ဒါသဘောတူညီချက် 7
10.1 လက်မကို Android 5.1 2003-2007 ဟွန်ဒါသဘောတူညီချက်71. 10.1 လက်မ high-definition Multi-touch screen ကိုနှင့်အတူသင်၏မူရင်းကားတစ်စီးရေဒီယို Upgrade သို့မဟုတ်အစားထိုးရန်, သင်အရင်ကထက်တစ်ဦး, ချောမွေ့မြန်ဆန်ပိုကောင်းစစ်ဆင်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မယ်။ အင်္ဂါရပ်များတစ်ဦးကကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့လေအေးပေးစက်သတင်းအချက်အလက်...
E39 2G RAM ကိုအန်းဒရွိုက် 7.1 ကိုရေကြောင်း
E39 2G RAM ကိုအန်းဒရွိုက် 7.1 ကိုရေကြောင်း သင်တစ်ဦးအမိန့်လုပ်သည့်အခါ 1. ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားသင့်ရဲ့မော်ဒယ်နဲ့တစ်နှစ်အကြောင်းကြားပေးပါ! သင်သည်သင်၏ BMW ကား E395စီးရီးသို့မဟုတ် E53 X5 အတွက် Navigation စက်ရုံတပ်ဆင်ကြလျှင်, ငါတို့ကို item သင့်ကား fit...
Audi A4 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားရေဒီယို
Audi A4 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားရေဒီယို ဖော်ပြချက်: - က Android 7.1.1 Lollipop Operating System ကို - CPU ကိုပရို: RK3188 1.6GHz Cortex A9 Quad-Core - RAM ကိုမှတ်ဉာဏ်: DDR3 ကို 2GB - iNand Momery: 16GB - ပံ့ပိုးမှု, HD 1080p ဗီဒီယိုများ - ကားဖွင့်ပွဲဂေါ့ Optional ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်များမှာလည်းစက်ရုံ...
E39 Full Touch ကားစတီရီယို DVD စက်
E39 Full Touch ကားစတီရီယို DVD စက် ၁။ E39 Full Touch ကားစတီရီယို DVD player အတွက်ဒီ model ဟာအခုတော့တည်ငြိမ်နေပြီ။ OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံပါတယ် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုလိုဂို၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤ E39 Full Touch ကားစတီရီယို DVD player အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းသည်တစ်လလျှင် 20000...
VW တို့က Universal သည်အန်းဒရွိုက် 6.0 ကား Player ကို
VW တို့က Universal သည်အန်းဒရွိုက် 6.0 ကား Player ကို အရောင်သတင်းအချက်အလက် 1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနှင့်ဖော်ပြချက်ကနေတဆင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ styleand အရောင်များ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုမှုပေးရန်အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ထိုသို့သင်မသေချာများမှာ purchasing.If...
နှစ်ဦးကဒင်9လက်မက Android 6.0 Volkswagen က
နှစ်ဦးကဒင်9လက်မက Android 6.0 Volkswagen က နှစ်ဦးဒင်9လက်မက Android 6.0 Volkswagen ကသည် 1. : Amarok (2010-2015) သည်, ပိုးတောင်မာ (2011-2015), Bora အဘိဓါန် (Jetta) (2005-2015), Caddy (2004-2015), EOS (2006-2015), ဂေါက်သီး MK5 / V5 / A5 / 1k (မူကွဲ / GTI / အိမ်ယာ) (2003 - 2009), ဂေါက်သီး MK6 / VI6 / A6 / 5K (GTI /...
ဂျီပီအက်စ်ရေဒီယိုကို Android 6.0 နှင့်အတူ VW တို့
ဂျီပီအက်စ်ရေဒီယိုကို Android 6.0 နှင့်အတူ VW တို့ 1. =7လက်မ 800 * 480 capacitive မျက်နှာပြင် + dual-core 800MHz CPU ကို + 1080p စျေးနှုန်းဗီဒီယိုအဝေးမှ + AM ရေဒီယို (ယူရိုအတွက်ထောက်ခံမှု RDS), ဘလူးတုသ် + FM ရေအတွက်တည်ဆောက် CANBUS + အတွက်တည်ဆောက်ပြင်ပအင်တာနာ + ဖြင့် GPS စနစ်အတွက်တည်ဆောက်ထောက်ခံမှု Play ထိန်းချုပ်မှု...
PRADO 2018 ဘို့ကို Android 8.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ
octa Core 32G ဌာနမှူးယူနစ် Peugeot 405
Atenza 2017 ဘို့ High Quality ကားမာလ်တီမီဒီယာ
တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player ရေဒီယို 2din တက်စလာဟာ android
Android Car Dvd Player Px5 Android Car DVD Player android car dvd player 2din Android Car Gps Player Kia K3 Android Car Gps Player Xpander Car DVD Player Android Universal Car Gps Player Magotan Android Dvd Gps Player